Axmed Madoobe oo digniin kasoo saaray inay isbadeli karto rajadda ay shacabka ka qabaan Farmaajo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Axmed Madoobe oo digniin kasoo saaray inay isbadeli karto rajadda ay shacabka ka qabaan Farmaajo
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa si aan caadi ahayn uga digay inay isbadeli karto rajadda ay dadka shacabka ah ka qabaan madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Axmed Madoobe oo maanta Kismaayo kulan kula yeeshay wafdi ka socda beesha caalamka ayaa saxaafadda u sheegay in madaxweyne Farmaajo ay horyaalaan howlo adag oo u baahan in wax lagala qabto islamarkaana ay adag tahay in si dhaqsi ah uu kaligiisa howlahaasi ku dhameystiro.
Sidoo kale, Axmed Madoobe ayaa sheegay in haatan loo baahan yahay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo si daacad ah loola shaqeeyo, wuxuuna beesha caalamka ugu baaqay inay la shaqeeyaan islamarkaana ay garab istaagaan madaxweynaha cusub ee lasoo doortay.
Axmed Madoobe ayaa dhinaca kale tilmaamay in arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala madaxweyne Farmaajo iyo dowladda cusub ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dalka Soomaaliya.
Axmed Madoobe ayaa ugu dambeyn si weyn uga digay in hadii lala shaqeyn waayo madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo inay isbedeli karto rajadii ay shacabka qabeen, ee ahaa in isbadel uu ku keeno dalka.
Dhinaca kale, Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating oo isna goobta kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in uljeedka safarkoodu ee Kismaayo uu ahaa in marka hore ay madaxda maamulka Jubbaland la wadaagaan hambalyada doorashadii madaxtinimo ee dalka ka dhacday 8-da bishaan Febraayo.
Ugu dambeyntii, Michael Keating ayaa sheegay in kulanka ay maanta la yeesheen madaxda maamulka Jubbaland ay uga wada hadleen arrimaha abaaraha dalka ka jira iyo sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen islamarkaana la iska kaashado sidii looga hortagi lahaa macluul ka dhalata abaarahaas.